မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် အမြဲတမ်းဂုဏ်မဆုံးဖြစ်နေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဂုဏ်ဆောင် လူငယ်တွေအတွက် အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေရတဲ့ ဖိုက်တာကြီး အောင်လအန်လ်ဆန်ကတော့ အမိမြေမြန်မာနိုင်ငံကြီးကို ဘယ်လောက်ထိ မြတ်နိုးတွယ်တာလဲဆိုတာ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ မိသားစုနဲ့ အတူနေထိုင်သော်လည်း သူချစ်မြတ်နိုးတဲ့အားကစားကို မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုပြီး ကစားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ဇနီးနဲ့ သားလေးကလည်း သာယာလှပတဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးတာကြောင့် အမြဲလိုလို လာရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ Burmese Python၊ MMA ရဲ့အကောင်းဆုံးဖိုက်တာတစ်ယောက်။ သံလှောင်အိမ်ထဲမှာတော့ အဲဒီလိုမျိုးဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေအောင်လို့ အောင်လအန်ဆန်မှာ ခက်ထန်မှုတွေ၊ ကြမ်းတမ်းမှုတွေ အပြည့်ရှိနေရပါတယ်
ကြိုးဝိုင်းထဲက သူရဲ့ မျက်လုံးတွေကတော့ တောက်ပမှုအပြည့်၊ပြိုင်ဘက်ကို ဘယ်လို အသာစီးရယူမလဲ ၊ဘယ်လိုနှိမ်နင်းမလဲ ဆိုတာတွေနဲ့ ပြည့်နက်နေပြီး ကြိုးဝိုင်းထဲက ထွက်လိုက်တာနဲ့ အောင်လအန်ဆိုင်ဟာ လုံးဝပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်။
ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ ခက်ထန်မှုတွေနဲက ပြည့်နှက်နေသလောက် အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ ပြင်ပနေထိုင်မှုဘဝကတော့ သိပ်ကို အေးချမ်းလွန်းပါတယ်။
သူကတော့ အသက်ထပ်ချစ်ရတဲ့ ချစ်ဇနီးလေး၊ချစ်စရာသားလေးအဒီးလေးတို့နဲ့အတူ ဘဝကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ အောင်လအန်ဆန်းဟာ နောက်ထပ် ရင်သွေးငယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ရတော့မယ့်အကြောင်းကို “ယောင်္ကျားလေးလား? မိန်းကလေးလား? Boy or Girl? “လို့ သူရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နာမှ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒုတိယမြောက်ရင်သွေးလေး ပိုင်ဆိုင်တော့မယ့် အောင်လအန်ဆန်း ကို ဂုဏ်ပြုစကားလေးပြောသွားပါဦးနော်။
← One Championship မှာ ပထမချီတိုင်းမှာတင် အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ ဘရန်ဒန်ဗဲရာအတွက် ပထမဆုံးထိုးရတဲ့ ဒုတိယအချီမှာရှုံးခဲ့
လပြည့်နေ့မှာ မိဘ၊ဘိုးဘွားတွေကို ကန်တော့ပြီး ဆီမီးပူဇော်ခဲ့ကြတဲ့ သက်မွန်မြင့်တို့ မိသားစု →
October 21, 2019 Real Internet Comments Off on အီဂျစ် အင်တာနေရှင်နယ် စီးရီးမှာ ချန်ပီယံ ထပ်ဖြစ်တဲ့ သက်ထားသူဇာ